Munamato wekuti zvese zvifambe zvakanaka. ? Kubasa uye Muedzo.
Munamato kuti zvese zvifambe zvakanaka kubasa kana muyedzo chiitiko chechokwadi chekutenda.
Nguva zhinji zvinotendwa kuti chiito chekuda kana kuti chinoratidza kushaya simba kana kusakwanisa kuita zvinhu isu toga, asi izvi hazvisi zvechokwadi mune zvidiki.
Iko kudiwa kwekutsigirwa naMwari kunoratidza kuti isu tiri vanhu vemweya uye tinoda kuti munhu wese ave mune izvo zvine chekuita nesu kana nekuti isu tava kuzotanga bhizinesi idzva.
Chinhu chinonyanya kurairwa kuita munamato uyu kanokwana katatu pazuva, unogona kuchawedzera mazuva aunoda.
Zvingave zvakakwana nemazuva matatu chete kana chikumbiro chauve nacho chingada mamwe mazuva mashoma.
Chokwadi ndechekuti chinongodiwa kuti munamato ubudirire ndechekutenda kwainoitwa.
1 Munamato wekuti zvese zvifambe zvakanaka - Chinangwa
1.1 Munamato kuti zvese zvifambe zvakanaka pabasa
1.2 Munamato kuti zvese zvifambe zvakanaka mukuyedzwa
1.3 Munamato kuti zvese zvifambe zvakanaka mukushanda
2 Inotora nguva yakareba sei kuti ibate?
Munamato wekuti zvese zvifambe zvakanaka - Chinangwa
Chinangwa chemutongo uyu chakajeka uye inogona kushandiswa mune ese anogona kesi.
Nguva zhinji tiri kutanga chirongwa chitsva umo hatisi zana zana chokwadi asi isu tichiri kuda kuyedza, nekuti mune izvo zviitiko izvi munamato Izvo zvakakosha.
Kukumbira Mwari nhungamiro muzvinhu zvatinoita kana kwaari kuti atibatsire kuita zvinhu nenzira neizvozvo kwakakosha.
Nzvimbo nyowani dzinokwanisawo kuve mumunda wezvidzidzo, umo kufarirwa kwaMwari kunogara kuchibatsira.
Kana isu tinogona kubvunza kuti iwo wepamusoro kuve uchitibatsira kupfuurira muhukama huri kungoerekana kutora nuances isingadiwe.
Mune fon, munamato uyo kuitira kuti zvese zvifambe zvakanaka zvinokwanisa kuiswa muzvizhinji.
Izvo zvinogona kuitwa nemhuri yese uye nenzira iyi, zvaari pamwechete kubvunza chinangwa chimwe chete, munyengetero unowedzera simba.
Rangarira kuti izwi raMwari rinoti kana vaviri kana vatatu vakabvuma ndokumbira Mwari iye achazopa izvo zvikumbiro zvakaitwa.
Munamato kuti zvese zvifambe zvakanaka pabasa
“Mwari wangu, ndinokumbira kuti kana mapinda basa rangu chigadzirwa chiripo, ndinokumbira huvepo hwenyu kuti nditende nekuda kwezuva idzva ramunondipa. Ini ndinokumbira kuti rive zuva rerunyararo uye muzere nenyasha dzenyu, tsitsi dzenyu, rudo rwenyu uye zvese zvinoitika maererano nechirongwa chenyu chakanaka.
Nhasi, ini ndinokumbira kuti mapurojekiti angu ese kuitwe, mazano angu anoitwa uye kunyangwe zvidiki zvidiki zvakawanikwa muhupenyu hwangu nebasa rangu chikamu cheuchapupu hwako hunobwinya.
Ishe Jesu, ropafadzai basa rangu, vabati vangu, vatengi vangu, vandinoshanda navo uye nevanhu vese vanoita kuti kambani iyi ibudirire.
Baba Vekudenga, mutsiridza kuda kwangu uye nesimba rangu kuti ndiite basa rangu munzira yakanaka kwazvo.
Nhasi, ini ndinoshuva moyo une mutsa kuti ugare uchishandira vatengi vangu uye vatinoshanda navo nemutsa. Ishe ndipeiwo muromo unonyemwerera, vane tariro nemeso izvo zvinokoshesa zvese zvavanoona vakakukomberedza.
Bvisa mazwi anogumbura kubva kwandiri uye undiitire munhu akanaka.
Ndipe maoko maviri kuti ndishande ndichiremekedza mhuri yangu, ndipeiwo shungu yekumuka zuva nezuva ndichinyemwerera.
Ishe, nditungamirire mukati menguva dzese dzandinonzwa kuti ndarasikirwa kuchamhembe, iva simba rangu nehushingi hwangu, ndipeiwo moyo wakashinga sokwenyu.
Mwari wekudenga Mwari, itai zuva rino uye zuva rega rega rekushanda rive rakanaka pane zvese, ndibvisei paruoko rwenyu.
Kune nharaunda dzekushanda kana matambudziko matsva ebasa ayo pasina mubvunzo anoda rubatsiro rwakawedzerwa mumunamato.
Bvunza zvese zvinofamba zvakanaka pabasa Ndiwo munamato wekuti inogona kuitwa mazuva ese, vasati vabuda mumba.
Tsika yakanaka yatingateedzera kumba ndeyekunamata munamato mumwe pazuva tisati tasiya vese kumba mangwanani.
Nenzira iyi isu tinobatsira vadiki kana avo vasina simba mukutenda kuti vavimbe zvakanyanya musimba remunamato.
Munamato kuti zvese zvifambe zvakanaka mukuyedzwa
“Wakakodzera Mutongi, mwanakomana waMaria, muviri wangu urege kuzadzwa kana kuti kuteurwa kweropa rangu. Kwese kwandinoenda, maoko ako anondibata.
Vanoda kundiona zvakashata vane maziso uye havandioni, kana vaine zvombo havandikuvadze, uye nekusarongeka havanditungamirire.
Nejasi rakanga rakafukidzwa Jesu zvino ini ndakaputirwa, kuti ndirege kukuvadzwa kana kuurayiwa, uye mukukunda kwetirongo handisi kuzviisa pasi. Kupindirana kwaBaba, Mwanakomana neMweya Mutsvene.
Kutarisana nedare repamutemo inguva yekutarisisa uye kunetseka umo munamato wekuti zvinhu zvese zvifambe zvakanaka zvinogona kubatsira zvikuru.
Kukwanisa kuendesa zvisina kunaka masimba uye kukwanisa kurongedza izvo zvakanaka munzvimbo iyo zvese zvinotaurwa nekuitwa zvikafungwa pamusoro zvakanyanya zvakaperera zvinogona kuve ruponeso rwedu chete.
Unogona kunamata usati uye panguva kutongwaIcho chiito chichatibatsira kuchengetedza runyararo uye kuita sarudzo dzakanaka.
Munamato kuti zvese zvifambe zvakanaka mukushanda
O Jesu, Ndimi Shoko rechokwadi, Ndimi Hupenyu, Chiedza, Ndimi nzira yedu, Jesu, Ishe wangu anodikanwa, uyo akati: "Kumbira uye uchazvipiwa, tsvaga uye uchawana, gogodza uye uchavhurirwa iwe, "kunyengeterera kwaMaria Amai vako Vakaropafadzwa, ndinodana, ndinotsvaga, ndinokukumbira netariro yese kuti undipe izvo zvandinoda nekukurumidza: (Taura zvaunoda kuzadzisa). Namata vatatu Baba vedu, vatatu Rumbidzai Marys uye matatu Glories.
O Jesu, Ndiwe Mwanakomana waMwari mupenyu, Ndiwe chapupu chakatendeka chaMwari mukati nyikaNdimi Mwari unesu, Jesu Ishe wemadzishe, akati "Chero chaunokumbira Baba muZita Rangu vachakupai" kuburikidza nekureverera kwaMaria, Amai Vako Vakaropafadzwa, ini nekuzvininipisa uye nemoyo wangu wese ndinokumbira nekutenda kukuru kuneWako. Baba muZita Rako kuti unondipa iyi nyasha yandinoona yakaoma kuwana kuburikidza nenzira dzangu dzisina simba: (Dzokorora netariro huru zvaunoda kuwana). Namata vatatu Baba vedu, vatatu Rumbidzai Marys uye matatu Glories.
Ah Jesu, Ndiwe Mwanakomana waMaria, Ndiwe unokunda zvakaipa uye rufuNdimi mavambo nemagumo, Jesu, Mambo weMadzimambo, uyo akati: «Denga nenyika zvichapfuura, asi izwi rangu haripfuuri» kuburikidza nekureverera kwaMaria, Amai Vako Vakaropafadzwa, ndinonzwa kuvimba kwakazara kuti kukumbira kuchapihwa: (Taura chikumbiro zvakare nekuzvipira kukuru).
Usati wapinda mukamuri rekushandira panogara paine kutya kwekusaziva zvingaitika, ndosaka kugadzira munamato kuitira kuti kuvhiya uye basa rese rive rakanaka.
Iyo inokurudzirwa zvakanyanya ita munamato uyu pamwe nemurwere vasati vapinda mukamuri rekuvhiya, unofanira kubvunza zvakanaka uye ita zvakananga nezvatiri kuda kuona.
Pakupedzisira, zvakanaka kutenda, nenzira iyi masimba akanaka anotapurwa ayo akakosha mumaitiro ese ehutano.
Inotora nguva yakareba sei kuti ibate?
Minamato haina nguva dzakatsanangurwa.
Kazhinji, zvinoenderana nemamiriro ezvinhu, zvinogona kutora maminitsi mashoma kana kuti maawa mashoma mukushanda.
Chinhu chakakosha ndechekuti une chokwadi chekuti uchamhanya zvakanaka.
Nenzira iyi, munamato kuti zvese zvifambe zvakanaka pabasa, kutonga uye kushanda kuchashanda nekukurumidza uye inoshanda.